I-Cave House, i-Suite in the Nature - I-Airbnb
I-Cave House, i-Suite in the Nature
Villarrubia, Córdoba, AL, i-Spain
Umhume ibungazwe ngu-Cuevas
U-Cuevas Ungumbungazi ovelele
Okuwukuphela kwendlu ye-troglodite e-Córdoba, okukhethekile kakhulu e-Andalusia
Ima ngaphakathi kwenkwali yamatshe. Sifinyelela kuyo ngengadi eyindilinga engu-3000 m2 ekhangayo eyizungezile.
Ukugcina izinga lokushisa elifanayo phakathi nonyaka wonke ukusuka ku-18º ukuya ku-20 ºC
Indlu iqhele ngamakhilomitha ayi-14 ukusuka eCórdoba
Le ndlu imi ngaphakathi kwenkwali yamatshe. Sifinyelela kuyo ngengadi eyindilinga eyindilinga eyimitha-skwele engu-3000 eyizungezile.
Siwela ithala elimhlophe, singena ekamelweni elikhulu elikhanyiswe kahle, lapho simangazwa izindonga zamatshe aluhlaza zesakhiwo salo.
Ukuvumelana kwengaphakathi layo kubangelwa ukuhlelwa, umbala kanye nezilinganiso zefenisha eziklanyelwe igumbi ngokukhethekile, lapho yonke into yokwakhiwa kwayo ibonisa inhlonipho enkulu ngesimo sayo sokuqala.
Igumbi lokugezela nekhishi liphinde livuleke ngqo engadini, lihlanganise ngokuvumelana izakhi zamatshe, imabula, insimbi, ingilazi nomhlabathi.
Nethezeka lapha cishe ekuthuleni okungaphansi komhlaba, kuyilapho ucabanga isibhakabhaka nezihlahla ngefasitela.
Izinga lokushisa lihlala ku-18 - 20 ºC unyaka wonke.
Indawo yaphansi: 90 m2
I-Terrace: 10 m2
Igumbi lokuhlala / lokudlela
Igumbi lokulala (omatilasi be-latex 160 x 200 cm)
Ukuhlala ezweni eliseduze ne-Cordova, lapho ungathola khona idolobha lethu le-World Heritage leminyaka eyinkulungwane, kodwa ngokuzola kokuphumula endlini yakho ejabulisayo ezungezwe imvelo, kuyilapho udweba isimiso sakho futhi ujabulele siqu sakho culinary. izintandokazi.
Ngokusho kwabavubukuli abavakashele le ndawo, le ndlu yake yaba yingxenye yomhume wenkwali epulazini, futhi mhlawumbe isuka enkathini yamaRoma lapho iCordova yaziwa ngokuthi iColonia Patricia, kodwa futhi ingase ibuyele emuva ezinkwalini zama-Arab. isikhathi esahlinzeka ngamatshe okwakhiwa kwedolobha laseMedinat al-Zahra kanye neCaliphal House yase-Ar-Rumaniya (zombili ngekhulu le-10 AD).
Phakathi nekhulu le-19 nelama-20, le ndawo ibisetshenziselwa ukulima, ukulondoloza izakhiwo ezihlala izibaya nezibaya zezinkomo, ingasaphathwa eyenkunzi lapho izinkunzi zazibanjelwa khona nemfuyo yepulazi, nokuheha abalwi bezinkomo ababebaluleke kakhulu ngaleso sikhathi.
Leli pulazi lisanda kusingatha ukuqoshwa kwefilimu ethi "Through the Eyes of Ouka Leele".
4.93 · 134 okushiwo abanye
Ipulazi lethu liqhele ngamakhilomitha amabili ukusuka eVillarrubia, idolobhana elinanoma yini edingekayo: amabhange, osokhemisi, izitolo ezinkulu (ukulethwa ekhaya), igrosa encane.
Ngaphandle kwalokho, izindawo zokudlela ezinokudla okumnandi okwenziwe ekhaya ongazithatha futhi ujabulele ekhaya echibini noma ku-choy
I-Baker iza nsuku zonke
6 km ukusuka eMedinat Alzahara
I-11 km ukusuka e-Almodovar del Rio nenqaba yayo enkulu kanye nechibi lokwenziwa elinemidlalo yamanzi
30km ukusuka ePalacio de Moratalla, 8ha of J.N. Forestier yakhelwe izingadi
40km ukusuka e-Natural Park Hornachuelos
Sihlala esakhiweni esikhulu sepulazi, amamitha angama-50 ukusuka eCasa Tierra kanye nama-30 ukusuka eLuna.
Ngakho sithi sawubona nsuku zonke futhi sixoxe ngokuhlala kwakho
Sisebenza nsuku zonke ekhaya ukuze sihlanganyele futhi sijabulele indlu yethu ezolile nenokuthula.
Noma yiziphi izidingo ezidingekayo zixazululwa ngokushesha
Ngakho sithi sawubona nsuku zonke futhi sixoxe ngokuhlala kwakh…
UCuevas Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: CR/CO/00369